Xog uruurin kooban oo ku saabsan ka bixitaanka UK ee Midowga Yurub – Radio Muqdisho
Xog uruurin kooban oo ku saabsan ka bixitaanka UK ee Midowga Yurub
Shacabka Wadanka Ingiriiska ayaa afti dad weyne ku go’aansaday in ay ka baxaan Midowga Yurub kadib sedax iyo afartan sano oo ay ka mid ahaayeen. Haddaba go’aankan aanan la filaynin ayaa gilgilay dhamaan dalalka reerYurub isagoo layaab iyo dareen feejignaan leh ku abuuray bulsho badan oo ay ka mid yihiin Soomaalidda heysta jinsiyadda dalalka Yurub ee u soo haajiray Dalkan UK, Waxaa jira su’aalo badan oo ay GSD soo weydiinayeen Soomaalidda heysata jinsiyadda British,ka iyo kuwa ku degan UK jinsiyadda Yurub oo aan jecelnahay in aynu ka jawaabno, inkastoo su’aalo badan hadba jawaabtoodu ay ku xirnaan doonto marka la ogaado nuuca heshiis ee dhexmari doona Midowga yurub iyo dalka Britain marka ay bilabaan wadaxajoodka rasmiga ah ee ka bixitaanka UK ee Midowga Yurub ee xeerka qodobka 50,aad oo ay adagtahay in la sii saadaaliyo waxa lagu heshiin doono.
Waxan ahay Soomaali British, Visa miyaan u bahnaan doonnaa hadii aan rabo inaan u safro dalalkaYurub?
Waqti xaadirkan jawaabta waa ‘’MAYA’’ sababtoo ah inta ay UK wada-xajoodka bixitaanka ee dhameystiran kala yeelanayso Midowga Yurub waad u safri kartaa Visa la’aan dalalkaYurub. Waxaa kale oo suurtagal ah in mustaqbalka aanay muwaadiniinta UK u baahan visa inay u qataanYurub, oo waxaa suurtagal ah in Britain la xaajootoYurub oo ay kasii mid ahaato isku socodka xorta ah.
Waxan ahay muwaadin Reer yurub ah oo u soo guuray UK, maxay saameyn ah oo ay igu yeelan doontaa ka bixitaanka UK eeYurub?
Waqti xaadirkan saameyn kugu mayeelan doonto, ilaa ay kazoo baxaan faahfaahinta ku saabsan heshiiska ay isla qaadan doonnaan UK iyo Midowga Yurub oo qaadan kara ilaa laba sanadood. Waxaa kunool UK ilaa 3 milyan oo Reer yurub ah, waxayna u muuqataa in ay sii wadan doonnaan inay ka sii shaqeystaan UK, sidaas si la mid ah waxaa Yurub ku nool 1.2 milyan oo British ah, iyagana waxaa suurtagal ah in ay dalalkaas ku sii nooladaan, ayna arrimahooda heshiis ka garaan UK iyoYurub.
Waxan ahay muwaadin Reer yurub ah balse waxan isqabnaa muwaadin British ah, haddaba maxay bixitaanka UK sameyn igu yeelan doontaa?
Waqti xaadirkan uma muuqato inay saameyn kugu yeelan doonto, waxaa jira muwadiniin kale oo British oo sidaas oo kale ay isku dhaxeen kuwa Reer yurub, sidaas daraadeed waxay saasaantu u egtahay in aysan ku saameyn doonin inkastoo wax kasta ay ku xirnaan doonnaan hadaba heshiiska UK iyoYurub ay gaaridoonaan.
Kaarkayga caafimaadk Yurub ee loo yaqaano (EHIC) ma isii shaqeeyn doonnaa hadii aan ku xanuunsado wadanka mid ah yurub,oo ma heli doonnaa daryeelk acaafimaad ee hadda la ii ogolyahay?
Waad sii isticmaali kartaa kaarkaaga caymiska caafimaadka ee Yurub (EHIC) ilaa iyo inta wada xaajoodka xeerk aqodobka 50,aad laga hirgalinayo, kaasoo xaqiijin doona xiriirka cusub ee dhanka gacansiga, caafimaadka, gashaandhiga iyo isku socodka dadk aee UK iyo Midowga Yurub. Inta ka horeysa waad sii isticmaali kartaa.
Waxan ahay muwaadin Reer Yurub ah oo isaga iyo xaaskiisa oo jinsiyada Yurub heysta isla degan UK, haddaba maxaa saameyn ah oo ay igu yeelan doontaa go’aanka ka bixitaanka UK ee Midowga Yurub?
Lama sii ogaan karo ilaa ay kazoo baxaan faahfaahinta buuxda ee heshiiska UK iyoYurub dhexmari doonaa ee Qodobka 50,aad ee xeerka ka bixitaankaYurub, inta ka horeysa, waxay u muuqataa in ay si caadi ah ugu sii noolaan kartaan UK.
In ka badan 70 kun Tahriibayaal ah oo gaaray Taliyaaniga bilihi u dambeeyay
Maxamed Cabdulle Wardheere oo codsaday in gurmad loo fidiyo “SAWIRRO”